K: Postcard from Davos
စာရှည်ရှည်ကို မျှော်ရတာ လည်ပင်းညောင်ရေအိုးဖြစ်နေပါပြီလေ
အတွက်လဲ ပို့ပေးအုံးလေ..ကေ..း)
အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ
လှလိုက်တာနော် ရှုခင်းတွေက။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံလည်းအဲဒီလို အလှတွေကို ထိန်းသိမ်းထားရမှာနော်။
မျှော်နေမယ် မကေ (နှင့် ပုလင်း ၂ လုံး)
သဘာဝရဲ့ အလှတရားတွေကို တ၀ကြီးသာ ခံစားခဲ့ပါမကေ...
ကေရေ… လှလိုက်တာ… ရှုခင်းလေးရော… လက်ရေးလေးရော… ပြီးတော့ ရင်ခုန်ရာအရပ်ကိုလဲ လွမ်းမိတယ်… မိကေ တဲ့လား…. တို့ ကိုလဲ အိမ်မှာ အဲလို မိ တတ်ခေါ်တယ်… ကေ့ကို လွမ်းတယ်
အစ်မရေ...ပြန်ရောက်ပြီလား..ခြေနေ ? ..
အဲ့ဒိလက်ရေးနဲ့ ညီမမှာစာအုပ်တစ်ခုရှိတယ်နော်... :D
ကိုယ့်ပြေ ကိုယ့်မြေ အလှဆုံးလေ..။
ကေ ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းပါစေ။
အသစ် အသစ်တွေကိုလဲ မျှော်နေပါတယ်...